Luchie Mendoza Allen: manfaat jahe bakar
manfaat jahe bakar Uru nke ginger anyị nwere ike isi nweta mfe na -eme kwa ụbọchị ná ndụ. Ginger bụ ogwu bụ dị ọtụtụ ebe na anyị n'ihi na usoro nke akuku ginger bụkwa ezi dị mfe otú o nwere ike imepe ngwa ngwa.
N'ihi na nwunye, n'ezie ginger bụ ndị mba ọzọ n'ihi na ọ bụ mgbe e ji dị ka ose na usekwu maka ekpomeekpo nri. Ma, ọ amama ke nrụpụta ọrụ nke ginger bụghị naanị nke ahụ, ginger ike ịnagide iche iche nke nsogbu ahụ n'ihi na e nwere ụfọdụ ọdịnaya ginger na e clinically -anwale ma e jiri mba dị ka otu n'ime ọgwụ osisi .
Abamuru nke Ginger
Ntre nso idi ufọn na nrụpụta ọrụ nke ginger n'ihi na ike kwa ubochi ? Ebe a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị na uru dị ka e hotara site na m.vamale.com .
Ginger nwere ike iji na-alụ ọgụ cancer
Ụfọdụ na nje virus na cancer ga- agha site ginger na-agụnye nkuume cancer, ovarian , colon , ara , anụ ahụ, pancreas na prostate .
Iji gbochie -arịa ọrịa shuga
Site na -amụ na-ekwu na ginger osisi nwere ike belata ọbara abụba , ọbara shuga , na cholesterol . Nke atọ mmewere bụ isi iyi nke nnukwu akpata ọrịa shuga .
Ginger nwere ike ji mee ihe dị ka ude
Dị ka ude , ginger nwere ike irè megide ụfọdụ nje na-efe efe dị ka nje ndị nke akụkụ okuku ume na na ụfọdụ arọ.
Ginger nwere ike ji mee ihe dị ka ọnyá afọ ọgwụ
Helico pylori ịbụ na nje bacteria bụ ịbụ na nje bacteria na- ọtụtụ ndị na- metụtara nrekasi obi . Ọdịnaya dị na ginger nwere ike igbochi nje bacteria na . Ọ bụrụ na ị na-enweta mgbaàmà nke nrekasi obi , mgbe ahụ, ị nwere ike ozugbo aṅụ ginger mmiri iji merie .
Ginger ike merie nsi
Ọdịnaya dị na ginger nwere ike ibelata etoju nke toxins nri ma ọ bụ nkà mmụta ọgwụ . N'ihi na toxins ẹdude ke nri ma ọ bụ ọgwụ dị nnọọ ize ndụ n'ihi na obi ike.
Nwere ike iji na-emeso menstrual mgbu
N'ezie n'ihi na ọtụtụ ndị inyom ndị na-eche ihe mgbu mgbe nanso , na ọmụmụ ihe e kwuru okwu ya na onyinye ke ginger dị irè ka mefenamic acid na ibuprofen na -ebelata menstrual mgbu.
N'ihi ya, ọ ga- afụ ụfụ ma ọ bụrụ na ị nwere ginger osisi ya na gburugburu ụlọ ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na mgbe ọ bụla ị chọrọ ịnọ ịtụcha ya. E wezụga ginger , ị nwekwara ike gbalịa uru nke dragọn ahụ mkpụrụ dịkwa nnọọ mma maka ịnọgide na-enwe ike ahu kwa ubochi. Jisie !
Diposting oleh Lisa Fernandez di 22.18